China UV420 prodection 1.56 Bhuruu rakatemwa mwenje rakavharika optical lens AR kupfeka. fekitori uye vagadziri | Kingway
UV420 prodection 1.56 Bhuruu rakatemwa mwenje rakavharika optical lens AR kupfeka.
Lenses Ruvara: Ruvara rwebhuruu
Index Monomer UV kukosha Diamater
Wedzera: + 1.00 ~ + 3.50
Kufambira mberi 70/12 + 2mm UC, HC, HMC
--- UV + 420cut tekinoroji inoburitsa kwete chete UVA & UVB, asiwo yakakura-simba rinoonekwa mwenje (HEV mwenje) ye400nm-420nm.
Izvo zvakanakira yebhuruu yakatemwa lens.
1. Bhuruu yakatemwa lens inogona kuvhara mhando dzese dzemagetsi zvigadzirwa, LED inoratidzira ipfupi-wave yakakwira-simba bhuruu mwenje yakaburitswa kurerutsa ziso rinokonzerwa nebhuruu mwenje uye zvimwe zviratidzo zvekusagadzikana.
2. Bhuruu yakatemwa lens inogona kudzikisira mwenje webhuruu pachivande che melatonin usiku, kune imwe nhanho Kuvandudza kurara.
Kupfeka Computer Blue yakatemwa Eyglass Lense.
Ikozvino yeBlue-cut prescription eyeglass lenses lenses inobatsira mukudzora iwo maranzi eBlue kubva kune zvigadzirwa zvemadhijitari, zvichipa kuzorora kukuru kumeso. Magirazi emeso evarume nevakadzi agara ari chinhu chakakura kubvira pakutanga, uye tekinoroji yazvino yeBlue-yakatemwa mumagirazi emaziso akagadzira zvakanakisa kwazvo kuramba yakachengetedzeka kubva pachiedza chinokuvadza chakadai. Nekudaro, chengetedza maziso ako sezvo nyika ingori nzvimbo ine rima isina izvi zvakakosha zvinhu.
Zvadaro: 1.56 PhotoGray Imwe Vision Lenses anopesana nebhuruu mwenje AR Kuputira NK55 Zvinhu
Bloco 1.56 Hc Mufananidzo Progressive